Izixhobo ze-Android-iifowuni, iitafile, iwatchwatch kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 19)
Sikuzisa amanqaku kunye noyilo lweHuawei P Smart ye2019, ifowuni entsha evela kumenzi waseAsia
I-Oppo A7 ngoku isemthethweni. Yazi zonke iimpawu zayo, iinkcukacha zobugcisa, ixabiso kunye nokufumaneka kwiimarike.
Fumanisa zonke iindaba eziza ku-Wear OS H, inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza yewotshi eza kuphehlelelwa ngokusesikweni kungekudala.
I-Exynos 9820: Inkqubo ye-Samsung Galaxy S10
Fumanisa ngakumbi malunga neprosesa ephezulu yesiphelo esivela kuhlobo lwaseKorea, i-Exynos 9820, eya kusetyenziswa kwi-Samsung Galaxy S10.
I-glitch kwiPixel 3 ibangela ukuba imiyalezo icinywe
Fumana ngakumbi malunga ne-bug entsha echaphazela ifowuni kaGoogle, kule meko yiPixel 3. Yenza ukuba imiyalezo icinywe.
Yile nto umbala omtsha we-Samsung Galaxy ujongeka ngayo
Inkampani yaseKorea i-Samsung isanda kukhupha uhlelo olukhethekileyo lweGPS S9 e China.
IVivo Y95 sele isemthethweni eneempawu ezininzi kunye nokuchazwa kobuchwephesha kuluhlu oluphakathi kuluhlu. Sinikela kuwe!
Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa ngokusesikweni kwefowuni ye-ASUS ROG eSpain. I-brand entsha ye-smartphone yokudlala ngoku isemthethweni.
Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kwe-OnePlus 6T emfusa ngokusemthethweni eSpain. Ifowuni ivula nge-15 kaNovemba.
Iinkcukacha ezintsha ze-Samsung Galaxy S10 ziqinisekisa indawo yekhamera yesixhobo ukugcina indawo kunye nokusebenzisa ibhetri enomthamo ophezulu.
Fumanisa ngakumbi malunga nezizathu zokuba kutheni i-Samsung isebenzisa izikrini ze-LCD kwiifowuni zayo ze-Galaxy A kuluhlu lonke lwe-2019.
Xa sele iinyanga ezimbalwa okoko ukhangelo lukhuphe ingxelo yokugqibela ye-Android ...
I-Samsung Galaxy J4 Core: Imodeli entsha ene-Android Go
I-Galaxy J4 Core: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwaseKorea oluthiwe thaca ngokusemthethweni.
Isifundo esilula apho sichaza khona ukuba neTop Shot yePixel 3 kwiPixel 2 ngokukhuphela kunye nokufaka iapk.
I-Huawei isungule i-Band 3 Pro kunye ne-Band 3e ii-wristbands e-United States. Yazi zonke iinkcukacha zexabiso kunye nokufumaneka kwezi.
Isamsung izakubonisa iprosesa yayo entsha kuluhlu lwe-Exynos ngokusemthethweni ngo-Novemba 14 kwaye sele sizazi ezinye iinkcukacha.
UTidal ubhengeze ukumiliselwa kwesicelo sayo sesamsung smartwatches
Iqonga lomculo lokusasaza iTidal, lisandula ukusungula usetyenziso lokuqala lwezinto ezinxitywayo ngesandla seSamsung smartwatches ezilawulwa yiTizen.
I-Vivo X21s, ifowuni entsha ene-Snapdragon 660 kunye ne-in-screen yokufunda iminwe
IiVivo X21s ziye zaziswa e-China nge-Snapdragon660 kunye ne-in-display yokufunda iminwe. Sikunika iimpawu kunye neenkcukacha.
Isamsung W2019 ngoku isemthethweni. Yazi zonke iinkcukacha ze-clamshell ye-smartphone yaseMzantsi Korea kunye ne-Snapdragon 845.
Inkampani yaseKorea i-Samsung isandula ukukhupha uhlaziyo oluhambelana nokhuseleko lwenyanga ka-Novemba kwi-Samsung Galaxy Note 8.
Uyilo lweHiSilicon Kirin 980 yeHuawei lubonakalisiwe ngokweenkcukacha. Funda malunga nenkampani yokuqala ye-7nm SoC.
Imidlalo yeFossil: Iwatchwatch yokuqala ene-Snapdragon Wear 3100. Fumanisa ngakumbi malunga neewarw smartwatch entsha yohlobo.
Fumana ngakumbi malunga neendaba ezivela kwi-Bixby, umncedisi we-Samsung, osele ethetha iSpanish ngokusemthethweni, kunye nezinye iilwimi.
Fumana ngakumbi malunga ne-UI entsha ye-UI interface, eyatyhilwa ngokusemthethweni kwinkomfa yonjiniyela.
Umenzi webhetri u-Mophie usandula ukwazisa ngecala leJuice Pack yebhetri ye-Samsung Galaxy Note 9
Fumanisa ngakumbi malunga nokunikezelwa kwefowuni ye-Samsung, esele sinayo idatha kunye nemifanekiso yokuqala esemthethweni.
I-ARCore ngoku iyahambelana ne-OnePlus 6T, Xperia XZ3 kunye ne-Honor 8X
Uluhlu lweetheminali ezihambelana neqonga lokwenyani le-Google, i-ARCore, lisandisiwe nje ngokongeza izixhobo ezithathu.
Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo lwamva nje lokhuseleko olufunyanwa ngoku yiNexus 6P kunye neNexus 5X kwaye ibonisa ukuphela kwenkxaso.
Fumanisa ngakumbi malunga nokunikezelwa kwefowuni esongekileyo yakwaSamsung, eya kwenzeka nge-19: 00 eSpain bukhoma.
Intlawulo yeFitbit 3 ifumene uhlaziyo onokuthi uphendule ngalo kwimiyalezo ngokuseta iimpendulo ezikhawulezayo.
Umncedisi wesandi yinkqubo evela kwi-Samsung ngokwayo eyongeza izinto ezininzi zokulawula isandi ngendlela othanda ngayo kwiGalaxy yakho.
Iphetshana elitsha lisungulwe kwimarike, kwaye lulutsha lweHuawei MediaPad M5. Yazi iimpawu zayo, iinkcukacha kunye nexabiso.
Fumana ukuba zeziphi iifowuni ezivela kwikhathalogu yeHuawei kunye neNhlonipho eza kuhlaziya kule veki kwi-Android Pie nge-EMUI 9.0. ngokusemthethweni.
Fumana ngakumbi malunga nokufika kwale LG G7 Fit ngokusemthethweni eSpain, ixabiso eliza kuthi likwazi ukuthenga ngalo kunye neenkcukacha zalo.
Ukuba ujonge iselfowuni okanye ibhanti ye-smart ngexabiso elifanelekileyo, awungekhe uphulukane nethuba lokusebenzisa ezi zinto ziHloniphekileyo ngesikhumbuzo sayo.
Ilaptop elandelayo ethi umenzi uChuwi acwangcise ukuyivula kwintengiso yiLapBook Pro, ilaptop enezakhelo zesikrini ezincitshisiweyo
I-YouTube yongeza i-Mate 20 entsha kuluhlu lwezixhobo zayo ezicetyiswayo ukonwabela i-YouTube
Uluhlu lweetheminali ezihambelana neYouTube luye lwandiswa ngokongeza iMate 20 entsha evela eHuawei kunye nePixel 3 evela kuGoogle
I-OnePlus icacisa ukuba kutheni i-OnePlus 6T ingenazaziso ze-LED okanye ukumelana namanzi
I-OnePlus icacisile ukuba kutheni iflegi yayo entsha, i-OnePlus 6T ingenayo inkqubo yesaziso se-LED okanye ukunganyangeki kwamanzi.
Fumana ngakumbi malunga nokuba kutheni i-Samsung ivula i-Bixby API kubaphuhlisi bezinye izinto.
I-OxygenOS 9.0.2 ngoku iyafumaneka kwi-OnePlus 6 enezinto ezininzi ezintsha kunye nophuculo. Sichaza indlela yokuyifaka kwisixhobo.
Emva kwezohlwayo ezininzi zase-US ngokuchasene ne-ZTE kunye nesivumelwano esibaphakamisile, inkampani iqala iphinda iseke iifowuni kweli lizwe. Ngeli xesha, kwiitheminali ezimbini.
Ushicilelo loLutsha lweVivo Z1 ngoku luyafumaneka ngoku-odolwa kwangaphambili e-China. Yazi zonke iinkcukacha zoluhlu olutsha lungabizi kakhulu.
IVivo Y93 isungulwe ngescreen esingu-6.2 ″ HD +, iSnapdragon 439 nokunye
IVivo Y93 ngoku isemthethweni ngeSpapdragon 439 ngaphakathi. Funda ngazo zonke iinkalo, ubuchwephesha kunye nexabiso lale fowuni intsha.
Fumanisa okungakumbi malunga neLenovo Z5 Pro, ifowuni entsha yaphakathi yeprimiyamu evela kuhlobo lwesiTshayina ngescreen esityibilikisayo kunye ne-in-screen sensor yeminwe.
I-Energizer E500S ene-Android Go isemthethweni eYurophu ngee-99,99 ze-euro. Yazi ukuba yintoni entsha evela kumenzi webhetri waseMelika.
URouyu FlexiPai usesikweni. Funda ngazo zonke iinkalo, ubuchwephesha kunye nexabiso lesixhobo sokuqala esinokugoqeka emhlabeni.
I-Nubia X ngoku isemthethweni. Yazi zonke iimpawu, iinkcukacha zobugcisa kunye nexabiso lesiphelo esitsha sebrendi enescreen esiphindwe kabini.
I-Honor Magic 2 ngoku isemthethweni: Isiphelo esitsha esiphakamileyo ngescreen sokuhambisa
Honor Magic 2: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga nesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina esele sinikezelwe ngokusemthethweni.
I-BlackBerry Key2 LE ifika ngokusemthethweni eSpain. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwefowuni entsha kraca kwilizwe lethu.
Izolo isizukulwana esitsha senkampani ye-OnePlus besiziswe ngokusesikweni, i-6T, itheminali enokuthi ithathelwe ingqalelo njenge ...
Emva kokugubungela umboniso wayo osemthethweni sikulethela uthelekiso olupheleleyo lwe-OnePlus 6T ngokuchasene ne-OnePlus 6. Ngaba utshintsho lwefowuni lufanelekile?
IMotorola iyilahlile indlu ngefestile ngokunikezela ngezibonelelo ezithile kwiAmazon eziya kusivumela ukuba sithenge iselfowuni eshibhile: iMoto G5 engaphantsi kwee-euro ezingama-115.
Umvelisi u-Motorola usanda kukhupha uhlaziyo kwi-Android Oreo 8.1 yemodeli zayo zeMoto G5 kunye neMoto G5 Plus.
I-OnePlus isandula ukubhengeza i-OnePlus 6T, iflegi entsha yenkampani yaseAsia eme kumfundi wayo weminwe odityaniswe kwiscreen.
Le yeyona ndawo ikude ekuhamba kuyo iMicrosoft
Eminye imifanekiso ikhutshiwe ibonisa uyilo lendoda ehambayo iMicrosoft esebenza kuyo kwii-smartphones kunye neepilisi.
Kuyabonakala ukuba, iGoogle inyanzela abavelisi ukuba bakhuphe ii-patches zokhuseleko rhoqo, yiyo loo nto i-Samsung Galaxy kufuneka ihlaziywe rhoqo.
Ukuvuza okutsha kusibonisa umlinganiso wesikrini se-Samsung Galaxy S10. Kwaye ukuba iyinyani, siya kujongana nefowuni ngezakhelo ezingaphambili ezimbalwa.
Ii-Samsung Galaxy A6s zisemthethweni; ifowuni yokuqala yenkampani yaseMzantsi Korea eyenziwe yenye inkampani. Yazi iimpawu zayo kunye nexabiso.
Isithethi seHuawei AI, isimbo sePod yasekhaya ngexabiso elinomdla kakhulu
Ngexesha lokunikezelwa kwe-Huawei Mate 20 e-China, umenzi wase-Asia ubonakalise uSomlomo we-Huawei AI, isithethi esitsha esine-smart esivela kwifemu yase-China.
Inqaku leMeizu M8 lisemthethweni kunye ne-Snapdragon 632 ngaphakathi. Funda malunga nazo zonke iimpawu zoluhlu oluphakathi.
Uluhlu lwezithethi lweAmazon Echo lwaziswa eSpain. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwezithethi zebrendi eSpain ngokusemthethweni
Ividiyo ikhutshiwe ibonisa uyilo lweHloniphe uMlingo 2, ukongeza kwimifanekiso eyahlukeneyo yemithombo yeendaba ebonisa ikhamera yesilayidi sayo.
Ulandela njani umcimbi wokubonisa we-OnePlus 6T
Uyilandela njani inkcazo ye-OnePlus 6T bukhoma. Fumanisa indlela elula onokuthi ulandele ngayo lo msitho wentetho.
INokia 7.1 ifika ngokusemthethweni eSpain. Fumana ngakumbi malunga nokufika kolu luhlu luphakathi ukuya eSpain ngokusemthethweni. Iyafumaneka ngo-Okthobha.
I-HTC Eksodus isemthethweni. Funda konke malunga nenkampani entsha ephathekayo esekwe kwi-blockchain yokugcina i-cryptocurrensets ngokukhuselekileyo.
UGoogle uyayibona ibug kwikhamera yePixel xa ugcina iifoto
Isigebenga sokukhangela siye saqonda ukuba ezinye iiPixels zinengxaki xa kufikwa ekugcineni iifoto zazo kwi-reel.
INetflix HDR iza kwiifowuni ezintsha ze-Android
Iifowuni ezintsha ze-Android ziyahambelana neNetflix HDR. Fumana ngakumbi malunga neefowuni ezintsha eziqinisekiswe ngokusemthethweni.
Inkampani yaseKorea i-Samsung sele iqalile ukukhupha uhlaziyo lokhuseleko oluhambelana nenyanga ka-Okthobha 2018 yeNqaku 8
Ngaphandle kwenani elikhulu lovavanyo olwenziwa ngabavelisi kwiitheminali ngaphambi kokuba bafikelele ...
INokia X7 iza kuphehlelelwa kumazwe aphesheya njengeNokia 8.1. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca kunye negama layo lamanye amazwe.
Isamsung iya kuhlaziya kwi-Android Pie kunyaka olandelayo. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla inkampani eyakukhupha ngayo oku kuhlaziywa kweefowuni zayo.
I-OnePlus 6T iya kuboniswa ngo-Okthobha i-29 ngokusemthethweni. Fumanisa izizathu zokuba kutheni uphawu lutshintshe umhla wokufayilwa.
I-Lenovo Bukela S kunye ne-Watch C smartwatches zisemthethweni. Funda konke ngezi zixhobo zisandula ukwenziwa.
I-CEO yeHuawei iqinisekisile ukuba bayasebenza kwifowuni yabo yokusonga eya kuthi iboniswe kwi-2019 kwaye iya kuba nokunxibelelana kwe-5G.
IVivo Z3 isemthethweni kwiinguqulelo ezimbini: enye ine-Snapdragon 670 enye ene-Snapdragon 710. Fumana zonke iinkcukacha zolu luhlu luphakathi lutsha.
I-Lenovo K5 Pro kunye nee-K5 zikhutshwa ngokusemthethweni. Yazi zonke iimpawu, iinkcukacha kunye namaxabiso ezi ndawo zintsha zophawu.
I-Lenovo S5 Pro ngoku isemthethweni. Yazi zonke iimpawu, iinkcukacha zobugcisa kunye nexabiso lolu luhlu luphakathi.
Inguqulelo ye-Wear OS yeSpotify isandula kufumana uhlaziyo olukhulu olwandisa inani leempawu elizibonisileyo ukuza kuthi ga ngoku.
I-OnePlus 6T iza kufika ngePie ye-Android
I-OnePlus 6T iza kuza ne-Android Pie ngokwendalo. Fumanisa ngakumbi malunga nenkqubo yokusebenza yohlobo oluphezulu.
Isamsung ilungiselela ukumilisela i-Android Pie beta program
Inkampani yaseKorea i-Samsung ilungiselela ukuvula iingcango zenkqubo ye-Android Pie beta
INokia X7: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana ngakumbi malunga noku kuziswa ngokusesikweni kweNokia 7.1 Plus kuhlobo.
I-MANN 8S ngumnxeba ophakathi ophakathi ophakathi ngoku ofumanekayo uyathengiswa. Yazi iinkcukacha zayo kunye nexabiso.
I-Huawei Mate 20X: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga ne-Huawei entsha yokudlala ye-smartphone ebonisiweyo ngoku.
Uyilo lweHuawei Mate 20 RS Porsche Design: Iinkcukacha kunye nexabiso. Fumanisa ngakumbi malunga nale nguqulelo yesiphelo esiphakamileyo sikaHuawei esele sinikiwe.
Libala i-Android Wear ngeHuawei entsha ye-GT efikelela kwiiveki ezimbini zobomi bebhetri ukuba ayisebenzi i-GPS kunye ne-sensor yokubetha kwentliziyo.
I-Huawei Mate 20 kunye ne-Mate 20 Pro: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni ezitsha eziphezulu zokuthengisa.
Uvavanyo lwebhetri apho i-Galaxy Note 9 kunye ne-iPhone XS Max bephantsi kwazo, sibonise ukuba i-Samsung Smartphone ngoyena uphumeleleyo
Uyilandela njani inkcazo ye-Huawei Mate 20. Fumana ngakumbi malunga nokunikezelwa kwesiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina.
I-HTC Eksodus sele inomhla wokubonisa osemthethweni. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwegama lefowuni yebhlokhi eza kutyhilwa kule nyanga.
I-Xperia XZ2 kunye ne-XZ2 Compact ziqala ukufumana i-Android Pie
Nge-Android Pie, kubonakala ngathi uGoogle ekugqibeleni ufuna ukuphelisa ukwahlulwa kube kanye, okanye ngo ...
Imbeko kwi-MediaPad T5: amanqaku, iinkcukacha kunye nexabiso lethebhulethi entsha
I-Honor MediaPad T5 ngoku isemthethweni. Funda ngazo zonke iinkalo, iinkcukacha zobugcisa kunye namaxabiso ale thebhulethi intsha.
Ngesi sibhengezo i-Samsung inyusa i-A9 entsha eneekhamera ezi-4
Isamsung ithumele kuYouTube intengiso yokuqala yeGPS A9, i-smartphone yokuqala kwintengiso eneekhamera ezi-4 ezisinika iziphumo ezimangalisayo.
INokia 3.1 Plus ngoku isemthethweni. Yazi zonke iimpawu, iinkcukacha zobugcisa kunye nexabiso lesiphelo esitsha senkampani.
IPixel 3 XL kunye nenotshi yayo efihlakeleyo
Inotshi yeGoogle Pixel 3 XL iyafihlwa ngesoftware, kodwa ngaba sikhona isidingo sayo? Ukuba awuyithandi inotshi, kungcono uthenge enye i-smartphone.
I-Galaxy A9 2018: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi lwe-Samsung kunye neekhamera ezine zangemva.
Isizukulwana sesithathu seChromecast sele sithengisiwe eUnited States nakwamanye amazwe, phakathi kwayo ngelishwa kungekho namnye othetha iSpanish.
Umenzi wezinto zokudlala utyhila ngokusemthethweni isizukulwana sesibini iRazer Ifowuni 2.
I-Oppo K1 isemthethweni kunye nomfundi weminwe odityaniswe kwiscreen. Zazi iimpawu, idatha yezobugcisa kunye nexabiso lale fowuni.
I-Samsung Galaxy Note 10 inokuyenza ngaphandle kwe-jackphone eyintloko
Yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba inkampani yaseKorea i-Samsung iya kwenza uqhagamshelo lwejack lwetheminali zalo eziphezulu zokugqibela zinyamalale ngokupheleleyo.
I-Galaxy A7 2018 ifika eSpain ngokusemthethweni
I-Samsung Galaxy A7 2018 isungulwe ngokusemthethweni eSpain. Fumana ngakumbi malunga nokufika kwebanga eliphakathi kunye neekhamera ezintathu zangasemva eSpain.
Emva kokumiliselwa kweGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3 XL, uluhlu oluphezulu lwandisiwe kwaye kunzima ngakumbi ukufumana ukuba yeyiphi na isiphelo sendlela esivumelana neemfuno zethu.
Zonke izixhobo ezisemthethweni zeGoogle Pixel 3. Fumanisa zonke izinto onokuzisebenzisa kungekudala kwiGoogle Pixel 3 yakho.
Umhla wokumiliselwa kwe-OnePlus 6T uqinisekisiwe eYurophu. Fumanisa ngakumbi malunga nokuba isiphelo esiphezulu sophawu lwaseTshayina luya kufika eYurophu.
UGoogle uthathe umzuzu wakhe namhlanje wentetho yePixel 3 kunye nePixel 3 XL. Iifowuni ezimbini eziza kunika okuninzi ukuze uthethe ngazo kwaye onokuzithenga ngoku.
Kuphi ukulandela umcimbi we-Google Pixel 3. Khangela iindawo zokulandela lo mcimbi.
INokia 7.1 Plus sele inomhla wokwazisa ngokusesikweni
Umhla wenkcazo yeNokia 7.1 Plus uqinisekisiwe. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla oza kuvulwa ngawo ifowuni yakwaNokia.
Kuya kubakho iHuawei Mate 20X yabadlali bebhola
IGOSA: Kuyakubakho iHuawei Mate 20X ekhethekileyo yabadlali. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha eza kuboniswa luhlobo lwaseTshayina kumsitho.
I-ZTE izakwazisa i-Nubia Z18S njenge-Nubia X nge-31 ka-Okthobha
I-Nubia Z18S izakufika kwindawo yentengiso njenge-Nubia X, ngokwe-poster entsha esemthethweni, ekwabonisa ukuba iya kutyhilwa nge-31 ka-Okthobha.
Uyilo lweMoto G7 lubonakalisiwe enkosi kunikezelo lwevidiyo ye-360-degree
I-Moto G7 ivele kwi-360-degree-render-render. Funda ngakumbi yoyilo lomlandeli we-G6 esungulwe kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.
UPeter Lau yi-CEO kunye nomsunguli wenkampani eza kumilisela i-OnePlus 6T. Uyenzile yacaca: ukususa i-audio jack bekungekho lula.
I-Huawei Mate 20 Pro ifumene amanqaku kwi-AnTuTu ngenqanaba eliyibeka ngaphezulu kweetheminali ezinamandla ze-Android. Siyakwandisa!
Ukuba ufuna ukufikelela kwidatha oyigcina kwiakhawunti yakho yefu ye-Samsung, kodwa awunaso isixhobo sakho, ungakwenza oko ngenkonzo yewebhu esinika yona.
I-OnePlus 6T iya kuboniswa ngo-Okthobha u-30 ngokusemthethweni. Fumanisa ngakumbi malunga nokunikezelwa kwefowuni yohlobo lwesiTshayina.
I-OUKITEL WP1: Ukucaciswa kwefowuni entsha erhabaxa. Fumanisa konke malunga nefowuni entsha kraca eya kutsalwa kwintengiso kungekudala.
Ityhile umhla wokuphehlelelwa kwe-OnePlus 6T. Yazi umhla oza kufika ngawo isiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina.
I-Pixel 3 XL isungula eHong Kong ngaphambi kwengcaciso yayo. Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kwefowuni kwangaphambili.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ugqatso lokujonga ukuba ngubani umenzi ongeze inani elikhulu lee-megapixels kwiikhamera ezibonakala ngathi ...
IMotorola izakwazisa iifowuni ezine kuluhlu lweMoto G7. Fumana ngakumbi malunga noluhlu lweefowuni ezityikityiweyo zonyaka olandelayo.
Isamsung iya nayo ngenzuzo ye-stratospheric kwikota yesithathu yonyaka. Iscreen kunye nememori yokuthengisa ngokuyinxenye ibekek 'ityala.
Isamsung ikhokelela kwintengiso yefowuni ephezulu eIndiya
Isamsung ikwinkampani njengenxalenye yesabelo esikhulu kwintengiso yefowuni yaseIndiya. Funda nzulu ngale ngxelo.
I-Motorola Moto One ifika eSpain
IMotorola Moto One isungulwe ngokusesikweni eSpain. Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kwegama eliphakathi lwefowuni.
Ikhamera ye-iPhone XS entsha ayiphumelelanga ukugqitha umgangatho asinika wona iHuawei P20 Pro namhlanje
IHuawei P20 Pro eYurophu ifumana i-Android Pie beta. Fumana ngakumbi malunga nokuhlaziya iifowuni kule beta.
I-LG V40 ThinQ: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuSungulwa. Fumanisa konke malunga nesiphelo esitsha sophawu lwaseKorea esele sinikezelwe ngokusemthethweni.
Uyilo lweXperia XA3 luhluzwe kwividiyo entsha enamazinga angama-360. Yazi ukubonakala kwesi sigxina silandelayo sendlu yaseJapan.
IHuawei's Mate 20 yenza ukubonakala kwi-Benchmark yeGeekbench ngeKirin 980. Fumana amanqaku athe abhalwa kuwo kwiziko ledatha.
I-Honor 8X sele ifumaneka ezivenkileni ukusukela izolo, i-smartphone ebizelwe isithsaba esiphakathi (ngemvume yeXiaomi) Ngaba iya kuba yintengiso enkulu?
Ividiyo ityhila idatha yokuqala ye-Sony Xperia L3, ifowuni ekumgangatho ophakathi evela kwaSony eza kufika kungekudala
Uyilo lwe-OnePlus 6T luqinisekisiwe kwimifanekiso yalo emitsha. Fumanisa ngakumbi malunga noyilo oluphezulu lwegama laseTshayina.
Ulawulo olukude lwePen entsha ye-Galaxy Qaphela i-9 iya kuhambelana nezinye izicelo
Isamsung ibhengeze ukuba izakuvumela abaphuhlisi ukufikelela kwi-S Pen SDK ukuze bandise inani lezicelo ezixhaswayo.
Ukucaciswa kokuqala kwento eza kuba yi-Samsung Galaxy S10 sele iqalile ukuvuza
INokia 5.1 kunye neNokia 2.1 zifika ngokusemthethweni eSpain. Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kweefowuni ezimbini zenkampani.
Funda indlela yokufikelela kule nkqubo yovavanyo ye-OnePlus 6T ukufumana iyunithi yasimahla ekhaya ngaphambi kwakhe nabani na.
Ii-Samsung Galaxy A6s ziye zavuza i-TENAA ngeendlela zayo ezithile zobuchwephesha. Fumanisa ukuba le femu isilungiselele ntoni.
Uvavanyo lweprojektha ye-Excelvan BL
Sivavanye i-Excelvan BL, iprojektha engaphezulu kakhulu, ukuya kuthi ga kwi-intshi ezingama-200 zesayizi yesikrini, i-Android, unxibelelwano olukhulu kunye nezithethi ezakhelweyo.
Eyona nto ithengwayo ibeka iChromecast 3 kwintengiso ngaphambi kokuba ithiwe thaca ngokusemthethweni
Ukuba ubulindele ukuvuselelwa kweChromecast, akufuneki kuthathe ixesha elide ukufumana isizukulwana esitsha, njengoko sele kusondele ukuthengisa.
IHuawei Y9 2019: Uluhlu oluphakathi lweHuawei
I-Huawei Y9 2019: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina olwazisiweyo namhlanje.
Unxibelelwano olutsha lwe-Wear OS luqala ukufikelela kwimilindo yokuqala
IiSmartwatches ziqala ukuhlaziya ujongano olutsha lwe-Wear OS. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo oluzayo kwiewotshi.
I-ZTE Axon 9 Pro iza kuphehlelela phakathi ku-Okthobha e-China
I-ZTE Axon 9 Pro izakufika kwimakethi yase-China ukusukela phakathi ku-Okthobha, ngokwesingqinisiso sakutshanje esenziwe yile nkampani inye.
UGoogle usandula ukubhengeza iindaba eziphambili ezizakufika kwikamva le-Wear OS 2.1
I-Samsung Galaxy Note 9 ihlaziywa ngophuculo olukhulu lwekhamera
I-Samsung Galaxy Note 9 ifumana uhlaziyo olutsha olunikezela ukuphucula kwicandelo lokufota. Fumanisa!
I-Realme 2 Pro isungulwe ngomboniso we-6.3-intshi FHD +, iSnapdragon 660, kunye nokunye. Yazi yonke into malunga noluhlu oluphakathi.
I-LG V40 ivela kwi-Geekbench ngaphandle kwe-Android 9.0 Pie
I-LG V40 ivele kwiBenchmark yeGeekbench ngeendlela zayo ezithile. Funda ngakumbi malunga neflegi elandelayo yaseMzantsi Korea.
Isamsung yazisa i-Galaxy J4 + kunye ne-J6 + eSpain. Fumana ngakumbi malunga nokufika kweefowuni ezimbini ezintsha ezivela kwinkampani yaseKorea eSpain.
Abathengisi babonisa iGoogle Pixel 3 XL ngombala omnyama, iminti kunye nomhlophe
Iinguqulelo ezintsha zeGoogle Pixel 3 XL zibonisa imibala emithathu yesixhobo enoyilo olukhethekileyo
IVivo ibhengeze isizukulwana sesine sokufunda ngeminwe kwizikrini kunye netekhnoloji entsha yokukhawulezisa i-DSP, evela kwisandla seQualcomm.
Uthotho olukhethekileyo lwe-Apple Watch 4 lubonelela ngokuzimela "ukuya kuthi ga" kwiiyure ezili-18, ngaphandle kwamathandabuzo ibhetri yayo iseyisithende se-Achilles
Uyenza njani okanye ingasebenzi inkqubo yokuthumela umnxeba kwiselfowuni yakho ye-Android. Fumanisa amanyathelo okusebenzisa lo msebenzi kwifowuni yakho.
Umfanekiso ovuzayo ubonisa isimemo kumnyhadala wokuphehlelelwa kwe-OnePlus 6T kwaye ngoku siyazi ukuba nge-17 ka-Okthobha iya kuba ngumhla wokuba isemthethweni.
Ungazilungelelanisa njani izivamvo ze-smartphone ye-Android. Fumanisa iindlela ezikhoyo ukuze ube nokulinganisa ifowuni yakho ye-Android ngendlela elula.
Uyilo lwePixel 3 kunye ne3 XL kaGoogle ibonakala kuhlobo olutsha oluvezwe nguEvan Blass. Fumanisa ukuba iifowuni ezilandelayo zenkampani ziya kuba njani.
I-Samsung Buds inokuba yintloko engenazingcingo kunye neBixby njengomncedisi wakho. Zonke ukubheja zivuliwe.
I-Kirin 980 ingaphezulu kwe-A12 Bionic ye-Apple, ngokwe-Huawei
I-Huawei Kirinj 980 ingaphezulu kwe-Apple A12 Bionic chipset, ngokutsho kwenkampani yaseTshayina. Funda ngakumbi malunga nale ngxelo.
I-OnePlus 6T ivele kwiifoto zokwenyani, ityhila uyilo lwayo lwasemanzini. Fumana ukuba iflegi elandelayo yenkampani iya kuba njani.
Ukulandela amarhe avela kumajelo eendaba ahlukeneyo e-China, kuqinisekisiwe ukuba iNhlonipho kunye neHuawei ziya kuqhubeka nokwenza iqela elinye leshishini.
Eyona nto ibonwayo yiBanggood kaSeptemba 2018. Ihlaziyiwe ngezithembiso ezitsha zeveki kaSeptemba 24 ukuya ku-30, 2018
Ukucoca ividiyo entsha yeHuawei Mate 20
Ividiyo entsha yeHuawei Mate 20 icociwe.Fumanisa uyilo lokugqibela lwesiphelo sophawu lwentengiso yaseTshayina enkosi kule vidiyo icociweyo.
Inguqulelo entsha ye-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yendawo yokugcina yangaphakathi yeHuawei Nova 3i ikhutshiwe. Kukhetho olutsha lombala.
I-Samsung Galaxy A7 (2018) iphehlelela ngomso eIndiya. Fumanisa ngakumbi malunga nokumiliselwa kwefowuni yekhamera yangasemva kathathu.
I-LG G5 iqala ukufumana i-Android Oreo
Igqala le-LG G5 sele iqalile ukufumana uhlaziyo ekudala lulindelwe abasebenzisi abaninzi abalindele ukuba lube kwi-Android Oreo, uhlaziyo esele lufumaneka eKorea.
Ukuba ufuna ukonwabela i-Samsung Galaxy A7 yamaphephadonga, kweli nqaku siza kukubonisa indlela yokukhuphela.
Ukucaciswa kobuchwephesha be-Oppo A7 kuye kwavuza. Funda ngakumbi malunga nokusebenza okulandelayo kwefowuni.
Ukucaciswa kweHuawei Y9 entsha (2019) echazwe yi-TENAA
I-Huawei Y9 (2019) iye yavuza i-TENAA kunye neenkcukacha zayo zobugcisa. Yazi zonke iinkcukacha zale fowuni ilandelayo.
Oku kunokuba kukubalulwa kwesiphelo esitsha esiza kuboniswa yi-Samsung ngo-Okthobha 11 ngeekhamera ezi-4
Iimpawu zokuqala zeGlass A9 Pro ziyavuza.Fumanisa ngakumbi ngefowuni entsha ye-Samsung eneekhamera ezine zangemva.
Geekbench inika iinkcukacha ezahlukeneyo zeRealme 2 Pro
I-Realme 2 Pro ikhutshiwe kwiGeekbench. Funda malunga neenkcaza ezichaziweyo zesiphelo sendlela ukusuka kwinkampani egxile kwimakethi yaseIndiya.
Ukunikezelwa kweNokia 7.1 Plus iyavela kwividiyo kwaye ityhila iinkcukacha ezingakumbi zoyilo lwayo
Uyilo lwe3D yeNokia 7.1 Plus luhluziwe ngokunikezelwa kwevidiyo. Funda ngesixhobo esilandelayo sophawu.